Uzokwethula incwadi yakhe yokupheka
Bongiwe Zuma | August 15, 2020
UKUBA ngusomabhizinisi owaziwayo kusho umthwalo omningi emahlombe akho uma ungowesifazane futhi unomndeni okudingayo nasekhaya.
Kepha usomabhizinisi owaziwayo waseHammarsdale, uNksz Nomfundo Mcoyi we-Icebolethu Goup, uveze ukuthi kunezinto ongeke waziqhelelanisa nowesifazane okwenza angasilibali isikhathi sokubeka ibhodwe eziko.
UNksz Mcoyi usengene shi kwezokupheka kanti kulindeleke ukuthi ethule incwadi yakhe yokupheka iBoardroom To The Kitchen with Nomfundo Mcoyi, njengoba kuyinyanga yabesifazane.
Le ncwadi kuthiwa izotholakala ngendlela ejwayelekile yokudayiswa ezitolo nasemahhovisi akhe kanjalo nangendlela yezobuchwepheshe besimanje kwi-internet.
UNksz Mcoyi akazogxila nje ekudleni kwasekhaya akuphekela umndeni wakhe kodwa uzophinde acobelele ngolwazi ngezinhlobo zokudla ezahlukene ezihambisana nemicimbi emikhulu okubalwa neyamabhizinisi.
“Ukudla kuneqhaza elibaluleke kakhulu emindenini yethu nasemicimbini eyenziwa emphakathini. Inhloso enkulu ngale ncwadi yokupheka ngukwazisa abafundi ukuthi kulula kangakanani ukuhlanganisa abantu ngokudla,” kusho uNksz Mcoyi.
Phakathi kokudla abantu abangakulindela nokuthandwa kakhulu emindenini eminingi kubalwa izindlela ezehlukene zokupheka inyama, imifino nezinye izibiliboco. Yize esengene kwezokubhala nokupheka kodwa awumile nomsebenzi wakhe adume ngawo emkhakheni wezamabhizinisi. UNksz Mcoyi unguSihlalo weSouth African Funeral Practitioners Association, unamasheya kwiScribante Labour Consultants kanjalo neBlacksuits. Usehlabane ngezindondo eziningi ezehlukene okubalwa neStandard Bank KZN Top Business Woman.
Ephetha uNksz Mcoyi uthe noma yikanjani abantu bazobe sebekwazi ukuyithola incwadi ngoDisemba.
Okwamanje uzosebenzisa izinhlaka zezindaba ezahlukene nezinkundla zokuxhumana ukupha abantu amaresiphi okupheka nezinhlobo zokudla eziqukethwe encwadini yakhe.